ရွှေပြည်သာရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ | iMyanmarHouse.com
သိန္း 200 မွ သိန္း 400 ထိ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
ဈေးတန် နေရာကောင်း ပေ (40 x60 ) ထောင့်ကွက် မြေကွက်အလွတ် အမြန်ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10131842 အတွက် Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09451338269, 09404475535, 09451338269, 09404475535
Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd. ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10098279 အတွက် Ko Myint သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Ko Myint ပိတ်ရန်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် / အမှတ် ( 10 ) ရပ်ကွက် / ဆိုင်ဖွင့်ရန်နေရာကောင်း / ရွှေရုံမှတ်တိုင်အနီး၊ ထောင့်ကွက် ရောင်းမည်...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9992215 အတွက် Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09451338269, 09404475535, 09697975719, 09777288308, 09450351010
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် မြေကွက် ရောင်းမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9958262 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင် ကားလမ်းမ အနီး၊ ပေ 20×60 မြေဖို့ ခြံခတ် ရေမြောင်းလုပ်ပြီး ရောင်းမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9955296 အတွက် (TOP) အိမ်ခြံမြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား (ရွှေပြည်သာ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရွှေပြည်သာ‌ဆေးရုံအရှေ့၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းအဆင်း၊ သမိန်ဗရမ်းပန်းခြံတွင် ပေ 20×60 မြေကွက်လွတ် ရောင်းမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9954957 အတွက် (TOP) အိမ်ခြံမြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား (ရွှေပြည်သာ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9906329 အတွက် ေရႊျပည္သာ (အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ေရႊျပည္သာ (အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္) ပိတ်ရန်
🌲ရွှေပြည်သာမြို့နယ်/ရာကျော်ပန်းခြံအနီး 🌲မြေ/(ပါမစ်)/ပေ(20×60)အရောင်းဈေးနှုံန်း 🌲(220)Ls/ရောင်းရန်ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9871452 အတွက် အာရှမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရွှေပြည်သာ ၆ရပ်ကွက်တွင် မြေကွက်ထောင့်ကွက်ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10169908 အတွက် Lodestar Law Firm & Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10136123 အတွက် Lodestar Law Firm & Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်